Ndị na -emepụta TPU na ndị na -ebubata ya - China TPU Factory
Ihe nkiri CPE maka mkpuchi mkpuchi CPE
PEVA onuete akara teepu maka disposable echebe clo ...
PES na -agbaze ihe nrapado na -ekpo ọkụ maka ogwe aluminom
Ihe nkiri EAA na -agbaze agbaze agbaze maka aluminom
Ihe nkiri TPU na -agbaze agbaze maka akwa n'èzí
TPU mpempe akwụkwọ agbaze agbaze agbaze maka insole
Ihe nkiri nrapado na -ekpo ọkụ maka insole
Ọ bụ ihe nkiri nrapado na -agbaze agbaze TPU nke dabara maka njikọta PVC, akpụkpọ anụ, akwa, eriri na ihe ndị ọzọ chọrọ obere okpomọkụ. Dị ka ọ na-adị, a na-eji ya emepụta PU ụfụfụ insole nke dị na gburugburu ebe obibi na anaghị egbu egbu. Tụnyere ya mmiri mmiri gluu bonding, nke ...
Ọ bụ ihe nkiri PU fusion nwere ọdịdị translucent nke a na -etinyekarị na njikọta akpụkpọ anụ na akwa, yana mpaghara nhazi ihe akpụkpọ ụkwụ, ọkachasị njikọta nke Ossole insoles na Hypoli insoles. Ụfọdụ ndị na -emepụta insole na -ahọrọ okpomọkụ na -agbaze ala, ebe ụfọdụ tupu ...
Ihe nkiri nrapado na -ekpo ọkụ maka uwe dị n'èzí
Ọ bụ mpempe akwụkwọ polyurethane na-ekpo ọkụ translucent nke dị mma maka ijikọ nnukwu eriri, akpụkpọ anụ, akwa owu, bọọdụ eriri iko, wdg dị ka akwa akwa akwa/mkpuchi mkpọchi/mkpuchi akpa/okpu-ndọtị/akara ụghalaahịa. Ọ nwere akwụkwọ bụ isi nke nwere ike ime ka ọ dị mfe ịchọta ...
Ejiri HD371B mee ya site na ihe TPU site na ngbanwe ụfọdụ na ihe ọmụmụ. A na-ejikarị ya na eriri mmiri atọ na-enweghị mmiri, akwa na-enweghị ntụpọ, n'akpa enweghị nkebi, mkpọchi mkpuchi mmiri, eriri mmiri na-enweghị mmiri, ihe na-enweghị ntụpọ, uwe na-arụ ọtụtụ ọrụ, ihe na-atụgharị uche na ubi ndị ọzọ. Ihe mejupụtara ...
Ngwaahịa a bụ nke sistemụ TPU. Ọ bụ ihe nlereanya nke etolitela kemgbe ọtụtụ afọ iji gboo arịrịọ ndị ahịa maka ịdịmma na njiri mara mmiri. N'ikpeazụ ọ na -aga ọnọdụ tozuru oke. nke dabara maka mpaghara mejupụtara uwe ime, akwa, sọks na akwa na -agbanwe na ...
Ihe nkiri TPU na -agbaze agbaze agbaze maka insole
Ọ bụ ihe nkiri nrapado na -agbaze agbaze TPU nke dabara maka njikọta PVC, akpụkpọ anụ, akwa, eriri na ihe ndị ọzọ chọrọ obere okpomọkụ. Dị ka ọ na-adị, a na-eji ya emepụta PU ụfụfụ insole nke dị na gburugburu ebe obibi na anaghị egbu egbu. E jiri ya tụnyere njikọta mmiri mmiri, thi ...